Xog:-Madaxweyne Farmaajo oo amray in safaaradaha shisheeye ka guuraan deegaanka madaxtooyada Soomaaliya | Kobciye24.com
Xog:-Madaxweyne Farmaajo oo amray in safaaradaha shisheeye ka guuraan deegaanka madaxtooyada Soomaaliya
Feb 22, 2017 - jawaab
Xog ku saabsan safaaradaha shisheeye ee ku dhow deegaanka madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegeysa in uu soo baxay amar faraya Safaaradaha Shisheeye ee ku dhexyaala Deegaanka Madaxtooyadu in ay mudo kooban gudeheed uga guuraan Xeyndaabka Villa Somalia.
Amarkan ayaa la sheegay inuu kayimid Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo isku dayaya sidii uu u kasban lahaa quluubta Shacabka Soomalaiyeed uma soo celin lahaa dowladnimada Soomaaliya.
Waxaa jiray kulamo madaxweynaha uu la yeeshay qaar kamid ah Masuuliyiinta safaaradohooda ay ku dhexyaalaan gudaha Safaarada isagoo kala hadlay sida dowladdiisa cusub udaneyneyso in laga guuro xeyndaabka madaxtooyada looga arimiyo dalka.
Masuuliyiinta labada safaaradood ee ku yaala deegaanka Madaxtooyada ayaa aqbalay dalabka Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo Sideedii bishan loo doortay xilka Madaxweyne.
Jabuuti ayaa noqotay safaarada ugu horeyso ee fulineysa dalabka Madaxweynaha waxeyna isaga guureysaa dhismaha ay ka daganeyd Madaxtooyada Soomalaiya iyadoo deegaansaneysa Xeebta Liido.
Madaxweynayaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo berri muqdisho u imanaya Xaflada caleema saarka Madaxweyne Farmaajo ayaa munaasabadaas kadib udhaqaaqaya iney dhagax dhigaan dhismaha cusub ee dageyso Safaarada Jabuuti ee ku leedahay Muqdisho.
Waxaa intaasi kadib Madaxtooyo baaqi kusii ahaan doono Safaarada Itoobiya ee Soomaaliya ee kutaala deegaanka Madaxtooyada Villa Somaliya, lama oga sida itoobiya ay ku ogolaan doonto iney agabkeeda ka xirxirato Aqalka looga arimiyo Dalka.
Siyaasiyiin iyo aqoonyahano Soomalaiyeed ayaa horay usoo jeediyay talada ah in Safaaradaha shisheeye laga raro Madaxtooyada si gaar ah waxey farta ugu godeen Itoobiya oo siyaasad ahaan aysan isjecleyn Shacabka Soomalaiyeed.
Dowladdaha Turkiga iyo Imaaraadka ayaa iyaguna Safaaradohooda waxa ay ku yaalaan Meel aan isdaasi uga fogeyn degmooyinka ku hareereysan Madaxtooyada Soomalaiya, halka kuwa reer Galbeedkana ay ku dhexyaalaan gudaha Xerada ugu weyn Ciidanka Amisom ay ku leeyihiin Dalka ee garoonka Aadan Cadde.